Askari loo haysto dilka wade mooto Bajaaj oo Maxkamad la soo taagay. – Puntlandtimes
May 18, 2019 Abdurahmaan Editor
Maxkamadd Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ayaa maanta la soo taagay Askarigii u horeeyay ee dilay Darawal Mooto Bajaaj ah oo dhowaan Ciidamada Ammaanka gacanta ku dhigeen.
Eedeysanaha la soo taagay Maxkamadda ayaa lagu magacaabaa Dable Boolis Cali Maxamuud Axmed oo 8-dii bishan ku dilay agagaarka Tarabuunka Darawal Mooto bajaajle oo lagu magacaabi jiray C/risaaq Yuusuf Guure, halka uu dhaawacay Cali Xaashi Mataan.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa Maxkamadda ka hor aqriyay eedeymaha askarigan, iyagoo soo jeediyay in dil toogasho ah lagu xukumo.
Dhageysiga Maxkamadda oo qaadatay saacado ayaa Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida G/sare Xasan Cali Nuur Shuute uu go’aamiyay in dhageysiga Maxkamadda ay maanta la soo gabagabeeyay, isla markaana Maxkamadda ay go’aan ka soo saari doonto.
Maxkamadeynta Askarigan ayaa noqoneysa tii u horeysay, waxaana ay ku soo aaday, iyadoo maanta uu Askari ka tirsan ciidanka dowladda uu darawal Mooto bajaajle ku dilay degmada Hodan, xilli darawalkaas uu Isbitaal u waday haweeney fool aheyd abaarihii saakay salaadii subax.